Abuuri tartanka leh ArcGIS - Gofumed
Febraayo, 2010 ArcGIS-ESRI, cadastre, Featured, GPS / Qalabka, topografia
Ma sahan cadastral la saldhiga a total, ka haysta saxnimada millimetric gooni xitaa waxaan noqon kartaa mid waxtar leh ujeeddooyin kale, la siiyey in uu leeyahay sare u qaadis ah ee qodob kasta. Waxaan u aragnaa in kiiskan sida in ay curiyaan khadadka dusha, taas oo hore u arkay oo leh AutoDesk 3DIyadoo Bentley Geopak y GIS kala cayncayn ah, sidaa darteed ujeedo waxbarasho awgeed, kiiskan ayaan ku samayn doonaa ArcGIS.
1 Xogta CAD
Layligan, waxaan haystaa feylka baaritaanka dgn, hal maalin maalmaha shaqada. Soo dejinta waa sida fudud sida:
Soo dejinta deg dega ah
Faylasha dgn waa la doortaa, diyaarna u ah, dhammaanba. U fiirso sida quruxda ay u egyihiin iyaga, waxaad arki kartaa maalmaha wiilasha shaqeeyay, markii ay isku dayeen iyo goortii way farxeen.
In ka badan xiiso, waxaad ogaan kartaa meesha ay qaadeen dhibcood, kiiskan oo kaliya ku dhowaad isbedelka koorsada ee tufaax, si ay u qaataan jibbaarada iyo asalka qiyaasta cajalad. Wax ku ool ah oo lagu taageerayo habka sahan ee wakhtiga ku-salaysan la'aanta ee leh taxadar qoraal ah ama sahanno kale. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa meesha ay kooxdu ku xiran tahay inay dib u eegto.
2 Gali dhibcaha geodatabaseka
Wixii maareyn ka fiican, waxaan ku gali doonaa qodobada geodatabase. Si arrintan loo sameeyo, waxaan u maleyneynaa in tan horay loo abuuray ArcCatalog waxayna qeexday fasal u gaar ah.
Si aad udheeraato
Fasalka hannaanka geodatabaseka
3. Abuuri qaabka dijitaalka
Qaar ka mid ah tallaabooyinkan waa laga fogaan karaa, laakiin ujeedooyinka fahamka isticmaalka 3D Analyst, waxaan u aragnaa iyaga si nidaamsan.
Qalabka falanqaynta ee 3D
Taas oo aan ku qeexnay magaca nooca modelka ah, waxaanu soo gelin doonaa dhibcooyinka:
Ku dar fasalka muuqaalka dhulbeereed
Hadda waxaan dooneynaa inaan soo saarno TIN
Waxaad arki kartaa in dhamaadka ah in aysan jirin dhibco ku filan in sadex-xaglood ay sabool yihiin, laakiin halka ay joogaan waddooyinka, joogtada ayaa weli ah.
Waxaan sidoo kale ogaan karaa in ay sababtoo ah aan waxba galabsan, ee kacdoonka wiilkan ayaa qaldamay iyadoo aan kor u qaadin kor u qaadida qalabka. Qalabka la isku halleyn karo, iyada oo faragalinta dhibcooyinka ku dhow laakiin fiirogelinta waxaa la heli karaa waqti si loo sameeyo sixitaanka. Sidoo kale, soo jeedi in labada dhibcood ee hore ee georeferencing isticmaalaan isugeyn sareeya ee ay bixiso GPS iyo masaafada ku filan si loo yareeyo khaladaadka wareegga sababta oo ah GPS qalad la'aan.
4. Abuuri khadadka fiilooyinka
Had iyo jeer gudaheeda 3D Analyst
Halkan waxaan dooranaynaa TIN cusub, lakabka bartilmaameedka iyo mudada u dhaxaysa wareegyada (kuwa kale budhcad-badeeda taas oo i badbaadisay sababo banaan).
Talaabooyinku waa ka badan marka la barbar dhigo Manifold GIS, laakiin ikhtiyaaraadka ayaa aad u awood badan.
5. Abuuri khariidada jiifka.
Maxaa soo socda ayaa ah in la isticmaalo tan, kaas oo lagu dabaqi karo naqshadaynta bullaacadaha, maadaama kaliya tani ma aha oo keliya sahan dhuleed, laakiin sahan cilmi-baaris ah oo aad ku shaqeyn kartid jihooyinka wadooyinka oo kaliya dhawr tallaabo .
Post Previous«Previous CAD: Dib u soo celi, horey u soo qaado
Post Next Diyaarinta koorsada ArcGISNext »
14 Jawaab in ay "Abuuraan Xiriiro leh ArcGIS"
Clapa isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa mid aad u fiican, laakiin waxaan sheegi karaa nooca aad ka dhigan karto xariiqyada xuduudaha.
Waxaan u maleynayaa in xiriiradaasi ay kuu adeegi karaan:
Marka ugu horeysa waa lacag, laakiin waxaan aaminsanahay in habkan ugu wanaagsan ee wax loo barto waa in lagu maalgaliyo koorso wanaagsan.
Onofreal2 isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaad wacan, kaliya faahfaahin aan dhawaanahan helay XCUMM oo xitaa aan weli dhibaato ka haysto waxyaabo badan, ma ii sheegi kartaa sida dhabta ah uga bilaabi lahayd xoqitaan kasta oo ay kugula talinayaan.
Ka hor intaadan la shaqeynin 3.2 oo runtii dareentay farqiga. Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto
Franz Leonardo isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin xog badan, TIN aad wax badan ka qaban kartid, halkan waxaad ku sharaxeysaa sida wanaagsan ee loo fuliyo khadadka.
Hubi xasuusta gudaha, oo fiiri qaabeynta, haddii ay wax ka qabato xasuusta gudaha.
Sidoo kale fiiri wakhtiga qabashada, haddii ay tahay mid aad u gaaban ama haddii loo sameeyo habdhaqameedka kaasoo kuu horseedaya inaad sameysid dib udiyaarin dhab ah.
Oo waxaan iyaga u mahad caawimo badan, anna waxaan leeyahay a Magellan GPS mapper mobile 6 v2.1 laakiin ma fahmin sababta aan u heli shay aan u baahanahay xasuusta ku filan postprocessing iyo ficil xasuusta dibadda waa faaruq ku habboonayd
Robert isagu wuxuu leeyahay:
Baybalku wuxuu macallin u samayn karaa faahfaahin dheeraad ah fadlan.
Polilineas waxay ku biiraan amarka Pedit, ee xulashooyinka ku biirista badan. Waxa dhaca ayaa ah inay iyagu noqdaan kuwa isku xidhan (polyline), haddii aad leedahay qaloocyo smartline ma awoodi doontid.
Valeria isagu wuxuu leeyahay:
Salaan Waxaan qabaa dhibaatooyin aan ku biiro dhowr qaybood oo ka mid ah xaglaha, qof ayaa i caawin kara, inaan caddaynayo inaan u baahanahay inaan ku biiro polylines oo leh polylines kale oo kaliya mid la fahmo? mahadsanid
cok2007 isagu wuxuu leeyahay:
Sharax aad u wanaagsan !!!
U fiican, waxaan doonayaa in aan ogaado haddii aan ayudar.Necesito ogaan kartaa sida loo sameeyo iyo hilqado, iyo unmapa rodalizacion la ArcGIS, haddii pudiers PAOs in jalfremar_59@yahoo.es diri isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa wax aad u fiican in la ogaado in ay jiraan dad badan oo aqoon u leh oo aan ka waaban inay taageeraan dadka kale.
Waxaad iga caawin kartaa inaan tilmaamo waxa ay yihiin tallaabooyinka lagu horumarinayo khariidada duufaanta iyo kaydinta kaynta jalfremar_59@yahoo.es iyo magaceyga Jose Alfredo Martínez, Honduras.
john sanmartín isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsantihiin waxtarka tabinta, macluumaadkaaga ayaa iigu adeegay wakhti fiican
RaptorX isagu wuxuu leeyahay:
UFF¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ iga yaabiyay DHEERAAD AH MAALIN KASTA iyadoo la kaashanayo daabacay online, gaar ahaan egeomates 2.0, mahad MAN talooyin ku ...
albaro gra isagu wuxuu leeyahay:
aad bay u wanaagsan tahay sharraxaadkan waxaan noqon lahaa mid aad uugu mahadcelinaya barashada bilowgii sida loo abuuro khadadka xuduudaha